Calaamka: Ugu sareeya 6 Nooca Adeegga Kaydinta Webka
. Waagii hore, websaydhiyeyaasha iyo kuwa xorta ah ayaa soo saari kara macluumaadka kaliya marka ay leeyihiin xirfadaha barnaamijka weyn, laakiin hadda tiro badan oo ah 11 . Mozenda waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican shabaq barnaamijyo. Waxay leedahay interface user-saaxiibtinimo oo kuu ogolaaneysa inaad soo saaro xog la'aan iyada oo aan wax xirfad ah barnaamijyada. Khabiiro Mozenda ah ayaa dhisay boqolaal wakiilo webka kuwaas oo ka shaqeeya malaayiin websaydh saacad gudaheed. Baaxadooda iyo ballaadhintooda qibradooda waa kuwo aan fiicneyn, waxayna ku fiicanyihiin in la dhiso xalalka khibrada sare leh iyo xalinta dhibaatooyinka adag. Muuqaalka ugu kala duwan ee Mozenda ayaa lagu sharxay hoos.
Tilmaamaha ugu sareeya # 1: Xogta la aqrali karo oo la cabbiri karo
Mozenda, way fududahay qof kasta inuu xoqo xogta la akhrisan karo oo la qaadi karo oo la xidhiidha mawduucyada. Si ka duwan adeegyada kale ee qashinka caadiga ah, Mozenda waxay kaa caawineysaa inaad ka soo saarto macluumaadka bogagga internetka. Waxay dhaaftay xiriirada aan faa'iido la'aanta aheynna si dhaqso leh ayaad u heshaa xogta. Intaa waxaa dheer, Mozenda wuxuu abuuraa sahal khafiif ah oo ku yaal shabakadaha bartilmaameedka ah ee kuu fududeynaya inaad xoqdo bogaga intaa ka badan ee suurtogalka ah.
Tilmaamaha ugu sareeya # 2: Macluumaadka aan khalad ahayn
Qalab badan oo ah qalab duubista shabakadda oo laga helo xog, laakiin waxaa ku jira hingaad badan iyo qalad naxwe ahaan. Si ka duwan adeegyadan, Mozenda waxay ku siisaa xog sax ah oo aan khalad aheyn waqti gaaban. Haddii aad rabto inaad xoqdo bogaga internetka oo aad ka walwasho tayada, waa inaad isku daydaa Mozenda isla markiiba. Ma aha oo kaliya inaad xoqdo xogtaada laakiin sidoo kale waxay la socon doontaa tayada iyo ka saar dhammaan qaladaadka natiijooyinka kama dambaysta ah. Muuqaalka # 3: Maqnaansho lagama maarmaanka ah
Si ka duwan sida kale shabaqa internetka s, Mozenda uma baahna wax dayactir ah oo loo isticmaali karo wakhti kasta, meel kasta. Xitaa marka aadan haysan xirfadaha barnaamijka ku filan, waxaad si fudud u isticmaali kartaa qalabkan si aad u hesho xogta la xoqay. Intaa waxaa dheer, uma baahnid inaad ku qorto code HTML. Sidaa darteed, Mozenda si isku mid ah ayay u wanaagsan tahay barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahayn.
Top Feature # 4: Isdhexgalka sahlan ee geeddi-socodka ganacsiga
Meelaha ganacsiga ee maalinlaha ah ee ganacsiga, dadka kala duwan waxay la falgalaan falanqaynta xogta iyo geedi socodka ururinta xogta. Shirkadaha waxay raadiyaan qalab duuban webka oo ballanqaaday natiijooyinka tayada si degdeg ah. Iyadoo Mozenda, si sahlan loo dhisi karo ganacsi online ah oo xoqin noocyada kala duwan ee xogta iyada oo aan wax arrin ah. Mozenda waxay caan ku tahay shirkadaha ayadoo ay ugu wacan tahay isdhexgalka ganacsiyada. Ma aha oo kaliya wax wanaagsan oo loogu talagalay sumcooyinka caanka ah laakiin sidoo kale bilowga iyo blogyada gaarka loo leeyahay.
Top Feature # 5: Gawaarida bogga internetka ee firfircoon
Mozenda waa qalabka kaliya ee la shaqeeya bogagga internetka ee firfircoon oo abaabulaya iyo dhismayaasha macluumaadka xogta ee isticmaalkooda. Uma baahnid inaad qorto qoraallada oo aad bilaabi kartid in xogta lagaa saaro mudo sanado ah. Mozenda waxay heli doontaa macluumaad faa'iido leh adiga oo ka imanaya bogagga internetka oo waxay hagaajin doonaan xogta aan habeysanayn, soo celinta xogta saxda ah.
Top Feature # 6: Taageeraya qaabab kala duwan
Mozenda wuxuu soo saari doonaa xogta wuxuuna u badalayaa qaababka CSV, JSON, XML iyo XLS. Waad ku kaydin kartaa xogta xogta ama waxaad u diri kartaa dariiqaaga adag ee ku habboon. Waxaa intaa dheer, Mozenda waxay xoqin kartaa qoraalka iyo sawirrada labadaba Source .